トップページ ＞ 言語 ＞ ショナ語 ＞ Twin Seoul Stage Danho rechinomwe "maererano (Reunion)" ndizvo
nokusingaperi kuwana [3500 Yen Free yokunyatsoongorora] kuti vafemberi, vanhu vaviri vasina vakawedzera yavo mumwe kukurira nhanhatu mapatya mweya chikuva kupinda kuda zvokunamata, mukuru zvasvika kuwana pfungwa mufaro akaputirwa simba. Uye ndiro danho wechinomwe rokupedzisira kugamuchirwa.
kwete shamwari chete, vaviri vakatanga kudira Unconditional ndiyewo kumativi, hakuna kare kutyisa chinhu. Kamwe iwe kusvika pachinhanho ichi, mumwe akakumbira mumwe kunopfuura chimiro, uchada kusangana zvakare pashure penguva refu.
Panguva iyi, anova mumwe kunotsvaka mamwe webato, unogona kunzwa kuti iye ari mupenyu kuti maererano. Zvadaro, pamwechete kudavira kuti kudanana harichinji, iwe kuti Sarakedase chokwadi pezvandakaita kurasa kuzvikudza pachake.
2 vanhu simba akadurura Unconditional vanhu mapatya mweya uye ambient muna
rechitanhatu Danho iri
? isiyo AER kupiwa rudo ukama kuti kumativi kufara, zvose kuregerera sezvo uye kuva, vaviri mweya rinoita resonance, unofanira kuva kukwezva zvakare. Uye kana iwe kutamba kuzosanganazve, tine ukama kuti anogona kupfeka kupa rudo mirawo kune bato.
nguva ino, akaziva kuti ukama hwavo ndiye mapatya mweya dzvene chaitwa naMwari, tinoona kuti pane simba ukama. Kuti zvasvika chaipo, uchava Mwari zvose uye zvakasikwa vakaropafadzwa. Zvadaro, zvinhu zvakasiyana-siyana nokuti vanhu vaviri mufaro anopiwa, unogona kunzwa zvakanaka mufaro.
? Hakusi anokumhan'arira chete ari
mapatya Seoul zvakare vakakomberedza vanhu kuvonga uye rudo, vanhu vaviri kuti zvava zvichibvira kuda nomwoyo wose kuva kumativi vanhu, rudo uyewo kumativi kwete mumwe chete It ndichadurura wakakura. Kune, swedera kana vaviri vanhu Unofanira kuonga chinowedzera nokuti Align zvose zvaakaita zvandinoudza nyika. Uye kufara kumativi, vaviri mufaro achava rutarinhari. Vakati
, hazvirevi kuti asingakundiki ari kuenda zvino kurarama, achashanyira zvakasiyana siyana zvakaoma. Zvisinei, kutsigira mumwe mumwe ari neukuru rudo nevanhu vaviri, uye zvinogonawo kugamuchira rutsigiro kubva kuvanhu akapoteredza, inofanira Ikeru zvakare kukurira zviitiko zvakaoma.
Saka mweya miviri vakapemberera rimwe danho _X000D_ mukunopera wechinomwe anova zvizere, mapatya Seoul airidza Anobvumirana, kukwanisa kupedza mweya muviri kusvika pakunamata yakakwirira chaizvo mudariro Xiang. Uye imwe hafu mweya kuti yave akatarira zvino, unogona kuuya zvechokwadi kuti pakupedzisira kutungamirira.
kuuya kuno, iwe unofanira kuenda zvinoverengeka miedzo. Mugwagwa haisi chero nzira sandara, unofanirawo vakamushatirisa. Zvisinei, naicho vanofunga kuti muitiro kusvikira mumwe kwazisai chaiye ukama, nokudhiraivha pane pachako rimwe chete danho, zvakakosha kuenda kukwesha mweya wako.
Asi, unofanira vakamushatirisa. Zvisinei, naicho vanofunga kuti muitiro kusvikira mumwe kwazisai chaiye ukama, nokudhiraivha pane pachako rimwe chete danho, zvakakosha kuenda kukwesha mweya wako.